8 Ezumike kacha mma ụbọchị ọmụmụ | Save A Train
Home > Njem USA > 8 Ezumike kacha mma ụbọchị ọmụmụ
N'afọ a ị nwere ohere inyocha ịtụnanya nke ụwa dịka iwu na-aga n'ihu na-eme ka ihu ọma. Ebe ezumike ndị emechiri na mbụ na-emepe nwayọ nwayọ ka ụwa na-agbanwe ibi na oria a na-efe efe. Ebe a na- 8 Birthbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ kacha mma na 2021 nke i kwesiri itule.
Train njem bụ ihe kasị environmentally friendly ụdị agagharị. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Mpaghara a dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Massachusetts ma ọ bụ otu n'ime mpaghara ndị a na-agagharị agagharị na East Coast. na 2021, ọ ka dị elu karịa eserese dị ka otu n'ime ebe kachasị mma njem njem ụbọchị ọmụmụ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na mpaghara a gụnyere osimiri mara mma, ogige, ụlọ akụkọ ọkụ, na ọtụtụ ntụrụndụ nkịtị. Ka ị na-agagharị obodo a, Ọ dị mkpa ka ịchọrọ ebe obibi dị mma. Ezumike ezumike na-eme nhọrọ kachasị mma ma a bịa na nke a. Kama ịnọ n'ọnụ ụlọ dị mkpirikpi ụlọ nkwari akụ, ị nwere ike ịhọrọ ịnọ na otu n'ime ọtụtụ Cape Cod ezumike ezumike. Nke a ga-enye gị ụdị mmetụta ụlọ n'ihi na ị ga-enwe ohere nke ihe eji enyere ndụ aka dịka kichin na ime ụlọ ịsa ahụ na ngwaọrụ ndị dị ka Ngwa HVAC. Nke a na-abịa kemfe karịsịa mgbe ejegharị ejegharị na ndị ezinụlọ dị ka ị ga-enwe ohere ịme nri obi na ihicha n'oge ọnụnọ gị. Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ ihe nzuzo na mgbazinye ezumike ma e jiri ya tụnyere ụlọ nkwari akụ.
2. Birthbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ kacha mma na 2021: Alaska
N'agbanyeghị na ala dị iche na United States, Alaska bụ otu n'ime ebe kachasị mma na ebe nkiri maka ileta. Ọ bụ ebe ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ zuru oke maka ezumike ski na ụmụaka. Mgbe ị gara n'akụkụ a nke obodo, ị ga-ahụ glaciers dịpụrụ adịpụ, ugwu na-arị elu, ebube moose, 12ft-ogologo anụ ọhịa bea, na ọtụtụ mmiri gbara gburugburu. Otu n'ime ebe kachasị mma ị nwere ike ịga na Alaska bụ Denali National Park, ebe ị ga-enweta bea, anụ ọhịa wolf, na moose. Ga-enwetakwa ohere ịga ije n'akụkụ Osimiri Savage ka ị na-enwe mmasị na mmiri dị jụụ. Y’oburu n’icho azu, ị nwere ike ịnweta ohere iji gaa ebe a na-akụ azụ nke Alaska, Erlọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhapụ ọzara wee gaa Anchorage nke bụ obodo kachasị na Alaska. Mgbe ị gara ileta Alaska na ezinụlọ, ị kwesịrị ịgba mbọ hụ na ị gara Arctic Circle Day Tour site na Fairbanks na Matanuska Glacier Full Day Tour. Njegharị abụọ a ga-emecha ezumike Alaskan gị.
3. Nnukwu Osimiri Ukwu Na Arizona
N'agbanyeghị na-enweta ihe dị ka nde mmadụ ise kwa afọ, The Grand kaniyon ka bụ n'etiti ndị kasị mma ebe ileta na 2021. Ọ bụ akara ama ama na United States na-egosi mara mma si n'akụkụ ọ bụla. Nwere ike ịga njem na mpaghara a ma ọ bụ were njem helikopta iji nwee ọ enjoyụ site na mbara igwe. Nwere ike ịnweta North na South Rims site n'akụkụ ndị ọzọ nke ndagwurugwu. Otutu ndi mmadu choro ileta Nnukwu Canyon National Park’s South Rim n'ihi na ọ na-emeghe oge ọbụlagodi n'oge oyi. Can nwere ike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ na nzuzo ma ọ bụ iji ụgbọ ala mgbagharị ndị njem na mpaghara a iji nwee ọ viewụ n'ọzara. Na nnukwu kaniyon, ị nwere ike nweta ịhụ karịa 447 umu nnunu ndi di n'ebe ahu, maa ụlọikwuu abali a n'ọzara, na-ekere òkè na-atọ ụtọ na-eme ka rafting. Na mpaghara a, fun fun adịghị agwụ agwụ!
4. Best ụbọchị ọmụmụ njem echiche nke Na 2021: Ogige Ntụrụndụ Crater Lake
Emi odude ke Oregon, Lake Crater bi na kilomita iri ise na atọ. Ọdọ ahụ dị n'ime Ugwu Mazama nke etinyere 7000 afọ ndị gara aga site na mgbawa. O nwere mmiri na-acha anụnụ anụnụ nke na-enye echiche dị egwu nke ga-eme ka ị tụọ ụjọ. Mma nke ọdọ a bụ nke ahụ i nwere ike ịga ndaba mmiri ihe dị ka 2000ft ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị ọchị ahụ. Iji nwee ọ enjoyụ njem gị na mpaghara a, ịkwesịrị iji ụbọchị atọ gagharịa n’etiti ihe ịtụnanya niile dị n’ọdọ mmiri ahụ ga-enye gị.
5. Disneywa Disney
Nke ikpeazụ n’ime ndepụta ahụ bụ Disney ogige ntụrụndụ na ebe ntụrụndụ na Orlando. Ebe a magburu onwe ya na-eme njem kachasị mma ụbọchị ọmụmụ maka ndị na-ekpochapụ kpamkpam n'ihe omume ha kwa ụbọchị. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka gbaara ndị nọọsụ ndị dechara NCLEX RN Ule akwukwo ma choro ezumike ezumike. Kechioma maka ha, kemgbe afọ malitere, Emeghee ọtụtụ ogige ndị ahụ ma dị njikere maka azụmaahịa. Nyere ka esi ewu ewu ya, Ebe a juru eju ebe a, ị ga-eji amamihe mee atụmatụ nleta gị. Iji kporie ndụ gị, ị ga-achọ ịnọ ọdụ 6-7 ụbọchị. Fọdụ n'ime ebe nkiri ahụ ị na-agagharịld ezube ịhụ gụnyere ndị Pirates nke Caribbean, Peter Pan's Flight n'etiti ndị ọzọ.
6. Ebe kacha mma njem na njem 2021: Venice Na Italytali, Europe
Ọ dị n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Italytali, Venice bụ ihe ọhụụ maka ndị njem. Ọ bụ isi obodo mpaghara Veneto ma mejupụtara ya 118 obere agwaetiti kewara ọwa mmiri. Agwaetiti ndị a jikọtara karịa 400 àkwà mmiri. Enweghị okporo ụzọ, nke pụtara enweghị mkpọtụ okporo ụzọ. Ndị mmadụ na-eji ụgbọ mmiri eme njem na ọwa mmiri, na-ejere ndị ọbịa ozi na ụfọdụ ngosipụta dị egwu nke na-enweghị ike ịhụ ebe ọzọ. A na-ahụta Venice ka otu n’ime obodo kachasị iche n’ụwa, enlisting ya dị ka otu n'ime n'elu ebe maka njem na foto na 2021. Ọzọkwa, A maara Venice ka ọ bụrụ ịhụnanya dị egwu na ọdịdị ya. Venice nwekwara n'elu ọtụtụ ndepụta nke kachasị mara mma n'obodo n'ụwa. Ọ bụ n'ihi onyinye ya pụrụ iche na-enweghị ụzọ, nnukwu ụlọ Devid agụghị ndị gbara, na akụkọ ihe mere eme hụrụ niile ya na-ewu.
7. Best Birthday Travel na-aga Na 2021: Lake Baikal, Russia
Bụ mba kachasị n'ụwa, Russia nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye tinyere osimiri, ugwu, na akụkọ ihe mere eme ụlọ. Otú ọ dị, Lake Baikal bụ ihe kachasị elu maka ọtụtụ ndị njem na foto. Ọ bụ otu n’ime ọdọ mmiri a kacha mara amara n’ụwa, na ọtụtụ akụkọ na-ekwu na ọ karịrị 25 nde nde. Ọ bụkwa ọdọ mmiri kacha mie emi n’ụwa, na-eru a kacha omimi nke 1642 mita. Ihe bụ ihe ọzọ? Baikal bụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri kachasị ukwuu n’ụwa. Karịrị 20% nke mmiri okike nke ụwa bi na ọdọ a. Maka gburugburu 5 ọnwa kwa afọ, ẹphe anọduje ekfu anụ Nchileke. Otú ọ dị, ọ ka nwere ike ịhụ dị ka omimi 40 mita n'okpuru ya. Maka gburugburu 10 ọnwa kwa afọ, mmiri ya na-anọ n'okpuru igwe oyi nke 5 ogo Celcius. Otú ọ dị, gburugburu ọnwa Ọgọst, okpomọkụ ya na-arịgo 16 degrees Celsius, na-eme ka ọ dị mma maka igwu mmiri ngwa ngwa na mikpuo.
8. Nnukwu mgbidi nke China
Ọ bụ ezie na China toro ịbụ mba tozuru etozu na teknụzụ taa, ọ ka na-efunahụ amara na mmasị ọ nwere mgbe amatachara ya. Enwere otutu ihe na ihe omimi banyere China, ma Nnukwu mgbidi ahụ dị elu na ọkwa na ọkwa. Dị ka otu ilu ndị China na-ewu ewu si kwuo, "Onweghi onye nwere ike ịbụ ezigbo dike ọ gwụla ma ọ nọ na nnukwu mgbidi". Agbatị gabigara ogologo nke 6000 kilomita, nnukwu ihe ncheta a bụ otu n'ime ụdị ya, ma bụrụ njem nleta maka onye ọ bụla njem. Ogologo ya dị gburugburu 6 ka 8 mita, Otú ọ dị, ọ gafere karịa 16 mita n'ịdị elu ya. O zuru ezu ezu karịa 10 Ndị na-eme mkpagharị nwere ike ịga ije na ya. Mgbidi ahụ nwere ọtụtụ nnukwu mgbidi, Otú ọ dị, a na-edekarị ndị kacha ochie n’ihe dị ka narị afọ asaa tupu a mụọ Kraịst. Nnukwu mgbidi ahụ bụ ahụmịhe otu oge na ndụ nke na-agaghị efu efu ego ọ bụla.
8 Birthbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ kacha mma na 2021: mmechi
Ezie na ị nwere ike ịkagbu ezumike gị 2020 n'ihi ọrịa ahụ na-efe efe, ị ka nwere ike ịga njem ahụ n’afọ a. Otú ọ dị, Gbaa mbọ hụ na iwere usoro niile iji chekwaa na ụgwọ njem. Ikwesiri ịchọta ma ọ dịkarịa ala ileta Cape Cod, Alaska, Osimiri Ukwu, Ọdọ Mmiri, na Disneyworld. Bido ịhazi njem gị taa ka ịnụ ụtọ njem gị. Anyị na-ahọrọ njem ụgbọ okporo ígwè dị ukwuu dị ka i nwere ike otú i nwere ike na-enwe echiche ndị kasị mma.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi otu n'ime ndị a 8 Birthbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ kacha mma na 2021 ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “8 Best Travel aga Na 2021" jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, na ị nwere ike ịgbanwe / fr ka / ru ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.
BestDestinations ụbọchị ọmụmụ kompas TravelDestinations TravelDestinations2021 TravelingDuringPandemic